トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny payout zava-misy sy ny antony manosika ny weekday sy ny fialan-tsasatra
Ao amin'ny pachinko efi-trano, dia ho zaraina ho amin'ny fivarotana mba hampisehoana ny antony manosika ny toeram-pivarotana sy ny faran'ny herinandro mba hampisehoana ny antony manosika eo amin'ny andavanandro. Toy izany koa pachinko parlors, nahoana no toy izany ny fahasamihafana mivoaka isika dia hijery raha tokony Mikiwamere aho na inona na inona antony toerana. Pachinko efi-trano mba hampisehoana ny antony manosika ny andavanandro, matetika isika no mitahiry izay sambatra ny toerana fepetra.
, ohatra, dia tsy mihazakazaka tsara fivarotana fifandraisana teo anoloan'ny gara toeram-pivarotana sy ny andro ny herinandro.
fivarotana pachinko toy izany, ary maro nahena ny mpanjifa iza no handeha maro andavanandro, dia misy fironana miezaka mankamamy. Mpanjifa izay tonga andavanandro, raha oharina amin'ny mpanjifa izay tsy tonga ihany ianao ny faran'ny herinandro, ianao dia be koa ny andro samy hafa ihany koa ny mbola hampiasa vola amintsika amin'ny alalan'ny. Tsara pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny miasa amin'ny andavanandro dia avereno sitrana amin'ny alalan'ny fampihenana ny weekday ny mpanjifa, moa ve ianao ary aoka mba ho azo antoka mafy orina ny varotra sy ny tombom-barotra sy ny asa lehibe.
ho izany, fa vitsy ambaratonga mandritra ny herinandro, mba hanatanteraka ny raharaham-barotra mba hampisehoana ny antony manosika.
Na izany aza, dia toa hoe tena sarotra ny milaza. Andavanandro, satria misy 5 andro isan-kerinandro, fa tsy maty indray mandeha, dia mety tonga tsikelikely hivarotra. Tahaka izany, koa voan'ny fantsika fanitsiana, Horukon toerana, tsy ho avy intsony afa-tsy mahita onjam-ROM dia ny toe-quo. Tsy manatrika weekday andro vitsivitsy, dia tsy ho azony fantarina ny antony andavanandro.
Na izany aza, toy izany pachinko efi-trano, ka ny faran'ny herinandro sy ny fety dia mba hahazoana antoka fa andro famoriam-bola, izay tokony tsy namely Heveriko fa azo antoka.
hanova in, fa dia pachinko efi-trano mba hampisehoana ny antony manosika ny asabotsy sy ny alahady, ho mora kokoa ny fahita amin'ny pachinko suburban parlors sy toeram-pivarotana izay tsy afaka ny hanana asa mafy orina. Koa satria
asabotsy sy alahady ihany koa ny andro mazava ho miakatra hetsika, matetika dia ny hanokana ny famerenana mahazatra, dia efi-trano pachinko fa mitranga ny toe-javatra izay tsy afaka ny ho. Izay midika fa ny zava-misy izay tsy maintsy mampiseho ny antony manosika ny asabotsy sy alahady, tamin'ny andro faran'ny herinandro ny olona manangona, dia mifamatotra amin'ny weekday ny fandidiana amin'ny fahatsapana tsara Satria misy sary.
pachinko Ao toy izany efi-trano, na tsara kokoa fanompoana ihany no asabotsy sy alahady, na miezaka mba hanomana ny loka ny voafetra, ianao dia afaka mahita ny ezaka na dia noho ny payout. Antso ny fotoana misy antony, noho ny pachinko parlors mba hampisehoana ny antony manosika mandritra ny herinandro, heveriko fa mora azo. Ankoatra izany, asabotsy sy ny alahady misy afa-tsy roa andro. Satria ny fandikan-teny ho amin'ny mora ny hahatakatra ny antony antso Mandra-pahatongan'izany, dia tokony handeha ho any amin'ny fitokonana mikendry roa andro asabotsy sy alahady. Raha vao manana ny tanjona, tsy weekday mihazakazaka, mihevitra aho fa ny olona ny pachinko parlors mba hamoaka ny antony ny faran'ny herinandro no fandresena mitombo isan-jato.
pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny antony manosika, ny asa sy ny loka, ankoatra ny baolina avy, ny ambaratongam-ny fanambarana ny afisy sy ny toy izany, misy ampahany izay afaka hita na dia avy any ivelany. Pachinko efi-trano fa handeha hilalao, ianao ny antony ao na andavanandro sy ny fialan-tsasatra, ny antony manosika dia hevitra izay hita maso dia ny hoe mahagaga ao.